Food Archives - Lifestyle Myanmar
နို့အမျိုးအစားအများစုက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်လွန်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာထိ သောက်သုံးနိုင်ပေမယ့် သက်တမ်းလွန်နို့ကို မသောက်သုံးမီမှာ တစ်ချို့အချက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နွားနို့ကောင်း/မကောင်းကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ? ၁။ အသွင်အပြင် ပထမဆုံးလက္ခဏာက နို့ရဲ့အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ နို့တွေ မကောင်းဘူးလို့ သံသယရှိရင် ဖန်ခွက်ထဲကို လောင်းထည့်ပြီး အပျစ်အကျဲ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အလုံးအခဲတွေပါနေရင် စားသုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ၂။ အနံ့ သိုးသွားတဲ့...
ဆောင်းရာသီအတွင်းမှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဗိုက်ပိုဆာနေနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီဆိုတာလည်း ပူပူနွေးနွေးအစားအစာတွေ စားလို့ကောင်းတဲ့ ရာသီပါ။ ဆောင်းရာသီမှာ လူတွေဟာ တခြားရာသီတွေထက် အစာစားချင်စိတ် ရုတ်တရက် ပြင်းထန်လာရတဲ့ အခြားအကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် ပိုစားဖြစ်တာလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ ၁။ အေးတာကို ခံစားရနိုင်လို့ပါ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း အပူချိန်ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အလိုလို နွေးထွေးသွားစေဖို့ ကြိုးစားရတာကြောင့် ကယ်လိုရီတွေ ပိုသုံးစွဲလာရပါတယ်။ ဒီအတွက် အစားထိုးဖို့...
ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် ဘယ်ဆီကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ? ဆီအမျိုးအစားအများကြီးရှိပေမယ့် သူတို့တစ်ခုစီက မတူညီတဲ့ ဟင်းလျာတွေအတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဆီရဲ့အနံ့အရသာနဲ့သာ ပတ်သတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့သောဆီတွေက မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကို ခံနိုင်သော်လည်း တစ်ချို့ဆီတွေက မခံနိုင်ပါဘူး။ သင့်အစားအစာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဂုဏ်သတ္တိတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေလိုတာကြောင့် ကြော်စားဖို့အတွက် ဆီရွေးချယ်ရာမှာ အထူးဂရုပြုသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြလိုပါတယ်။ မီးခိုးအမှတ်ဆိုတာဘာလဲ? မီးခိုးအမှတ်က temperature တစ်ခုသို့ရောက်တဲ့အခါ အပြာရင့်ရောင်မီးခိုးတွေ စတင်ထုတ်လွှတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။...
မီးဖိုချောင်ထဲက ပြတင်းဘောင်ပေါ်မှာ ဥယျာဉ်လေး တစ်ခုစိုက်ပျိုးတဲ့ အိုင်ဒီယာက ယခုခေတ်မှာ ပိုပိုပြီး လူကြိုက်များလာကြပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ စိုက်ပျိုးခြင်းက အော်ဂဲနစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရရှိပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားသုံးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် လူကြိုက်များပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ စိုက်ပျိုးလို့ရမယ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ပတ်သတ်ပြီး Lifestyle Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ဆလတ်ရွက် ဆလတ်ရွက်ကို စိုက်ပျိုးနည်းက အတော်လေး ရိုးရှင်းပါတယ်။...
ကလေးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာကို စားစေဖို့၊ ဟင်းလျာတိုင်းကို ဇီဇာမကြောင်စေဖို့ ကြိုးစားရတာဟာ မိဘအများစုအတွက် ခေါင်းမာတဲ့ နွားပေါက်လေးကို ထိန်းကျောင်းရတာနဲ့ တူပါတယ်။ ကလေးတွေကို အစားအသောက်ကျွေးတဲ့အခါ ဟိုဟာမစား၊ ဒီဟာမစားနဲ့ အစားဂျီးများနေရင် မေမေတို့လည်း စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို အစားဇီဇာမကြောင်အောင် ဂျပန်မိဘတွေ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးသလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သင့်ကလေးအား အရသာသစ်တစ်ခုကို ခံစားခွင့်၊ စမ်းသပ်ခွင့်ပြုပါ ကလေးတွေဟာ...
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အစာစားတဲ့ အလေ့အထက တစ်နှစ်ကျော်ပြီးနောက်မှာ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ မိဘတွေက ပုံမှန်အစားအစာတွေကို ကျွေးနေရင်တောင် ကလေးက အဲဒီအစားအစာတွေကို စားဖို့ စိတ်မဝင်စားတော့ဘဲ ငြင်းပယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းက အသက်နှင့်ဆိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ လူအများစုက ဒါကို အစာစားချင်စိတ်ကျဆင်းမှုအဖြစ် ရည်ညွှန်းပါတယ်။ အသက်တစ်နှစ်မှစပြီး ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ယခင်ကထက် နှေးကွေးစွာ ကြီးထွားလာပါတယ်။ ဒါက...
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရဲ့ အဆိုအရ ကင်ဆာရောဂါဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသေဆုံးမှုတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အကောင်းဆုံးကုသနည်းတွေကို ရှာဖွေဖို့ နေ့ရောညပါအလုပ်လုပ်နေစဉ် ကင်ဆာနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာသုတေသနက ကင်ဆာရဲ့ ကြီးထွားမှုကို တားဆီးပေးသော စူပါအစားအစာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သုတေသီတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ မီးဖိုချောင်အတွင်းက အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော အခြေခံအစားအစာတွေက ကင်ဆာပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးနိုင်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအစားအစာတွေကတော့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဝိုင်နီ ဝိုင်နီမှာ...
Estrogen Levels မျှတမှုက ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ အီစထရိုဂျင်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးဝိသေသလက္ခဏာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ တာဝန်ရှိသော လိင်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းက မျိုးပွားပြီးနောက် သန္ဓေသားအတွက် ကျန်းမာသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အမျိုးသမီးတွေအား ရာသီလာခြင်းသံသရာကို ကျော်လွှားဖြတ်သန်းနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်းမညီမျှမှုက အမျိုးသမီးတွေကို အားနည်းစေတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။...
ချီယာစေ့တွေကို အစားအစာနဲ့ အာဟာရကမ္ဘာမှာ စူပါအစားအစာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ချီယာစေ့လေးတွေက ပင်ပွားစေ့တွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ချီယာစေ့တွေက ပရိုတင်းဓါတ်၊ အရည်အသွေးမြင့် ဖိုင်ဘာဓါတ်၊ အိုမီဂါ ၃ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ၊ ကယ်လစီယမ်ဓါတ်တွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကောင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ချီယာစေ့တွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကြိုးစားနေသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ချီယာစေ့တွေက အာဟာရဖြည့်တင်းပေးရုံသာမက အမျှင်ဓါတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် နာရီပေါင်းများစွာ ဗိုက်ပြည့်နေစေပြီး အစာအာဟာရကောင်းမွန်စွာစားဖို့...